Par Taratra sur 26/12/2018
Hanova zavatra maro ny fanapahan-kevitr’i Rwanda, hampiakatra ny haban-tseranana amin’ny entana afarana any ivelany. Manamafy izany ny Fivoriambe iraisam-pirenena ara-toekarena (FEM), miaiky fa tsy nampiakatra fitomboan-karena ny fampihenana ny haban-tseranana sy ny tsenam-paritra. Ilaina ny fiaraha-miombon’antoka amin’ny firenen-kafa, ampitomboina ny famokarana sy ny indostria anatiny ary hitarina ny tsena hivarotana, fa tsy mionona amin’ny tsenam- paritra mahazatra intsony.
Miverina tsikelikely ny fandoavana haba amin’ny fanafarana entana. Tsy nahavaha olana, tsy nitondra fampandrosoana azo tsapain-tanana ho an’ny firenena tsirairay, ny fanalalahana, midika fivezivezen’ny entana malalaka isaky ny firenena, araka ny fepetra sy ny tanjon’ny Fikambanana iraisam-pirenena misahana ny varotra (OMC) indrindra tamin’ity taona 2018 ity. Vokany, mamerina mampihatra haba, arakaraka ny entana tena vokariny ka tokony harovany, ny firenena samihafa.
Tsy nitondra tombontsoa ho an’ny mpiasa aty amin’ny firenena an-dalam-pandrosoana ny fanatontoloana, mitovy endrika amin’ny mahazo ny mpiasa any amin’ny firenena mandroso. Izany ny fanambaran’ilay mpahay toekarena indianina, i Jayati Ghosh. Voamarin’ny Fikambanana iraisam-pirenena misahana ny asa (OIT) izany, nilaza fa tsy nihoatra ny 1,1% ny tahan’ny fitomboan’ny karaman’ny mpiasa isan-taona, ny taona 2017 teo, raha 1,8% isan-taona ny taona 2016. Ambany indrindra io tahan’ny fisondrotan-karama io, nanomboka ny taona 2008.